Ny Valosoa Vaovao, 13 Janoary 2018. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Cua-Antananarivo, 12 Janoary 2018. Fivorian’ny mpanolon-tsaina.
Marc Ravalomanana, 13 janoary 2018. Savigny le Temple. →
Ny Valosoa Vaovao, 13 Janoary 2018.
Publié le 13 janvier 2018 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Ravalo tany Toliara
Tsy manao ny asany ny CFM
Maro ny olona mametraka fanontaniana manao hoe : fa inona marina no andraikitra ataon’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy satria tsapan’ny maro fa toa ny fisehosehoana amin’ny Tele fotsiny no hita misongadina ataon’izy ireo .Vao haingana ohatra no nisy ny fandrabirabiana ny Filoha Marc Ravalomanana sady Mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo tany Toliara, izay nataon’olombitsy nokaramain’ny olon’ny mpitondra. Fihetsika izay mampiady ny samy Malagasy sy mandranitra adim-poko .
Fady eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny toy izany saingy ninia tsy niteny ny mpitondra fanjakana izay Ray amandreny iombonan’ny Malagasy indrindra ny avy amin’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM . Fa ny avy amin’ny Mpanolotsainan’ny Tanànan’Antananarivo kosa dia tsy niandry ela fa nanameloka avy hatrany sady nanakiana koa ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM), ka mahatonga ilay fiteny fantatry ny maro manao hoe: manaiky matoa tsy miteny . Mitaky andraikitra sy asa ny Fampihavanana fa tsy vitan’ny fisehosehoana fotsiny . Vohizina hatrany ny hoe Fampihavanam-pirenena satria firenena nandalo sady mbola miaina krizy i Madagasikara saingy mbola manjaka ny fihatsarambelatsihy . Tsotra ny resaka ! Rehefa tsy hanao ny asa sy ny andraikitra tokony ho ataony ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy dia tokony ho foanana fa mandany volam-bahoaka fotsiny , izay no tokony ho izy ! Sa ahoana hoy ianao ? Rina Rabemananjara.
Misokatra amin’ny mpivarotra rehetra ny varavaran’ny CUA
Noho ny fahatongavan’ny Asaramanitry ny taona vaovao 2018 dia tonga niarahaba ny ben’ny tanana Lalao Ravalomanana tao amin’ny lapan’ny tanàna Analakely ireo delegen’ny mpivarotra ao Anosibe sy ny solotenan’ny mpivarotra ary ireo mpiandraikitra ny filaminana ao amin’ny tsena ny TAM Anosibe ny Alakamisy lasa teo . Tao anatin’izany, raha nandray fitenenana ireto farany dia nanambara mazava sy nanome toky ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana fa vonona izy ireo hanao ho tsena filamatra an’Anosibe eto amin’ny tanànan’Antananarivo . Hanjaka ao an-toerana hoy izy ireo ny fandriampahalemana sy fahadiovana mba hanomezana fahafahampo ny mpanjifa maro tonga miantsena ao .
Fa omaly indray dia mbola tonga niarahaba ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy ny delegen’ny mpivarotra manerana ny secteur eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) : Behoririka , Andravoahangy , Pochard, Petite vitesse, Isotry , Ambodin’Isotry , Ambohimanarina, Namontana, tsena’ny Art Malagasy Digue, Soamanatombo sns… Nandritra izany no nanoloran’izy ireo fanomezana fahatsiarovana ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana amin’ny fahatongavan’ny taona vaovao . Nifanome toky ny roa tonta fa hiara-hiasa ahafahana manatsara ny toeram-piasàna ho reharehan’Antananarivo renivohitr’i Madagasikara . Ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana kosa raha nandray fitenenana dia nanambara mazava ny hafaliany satria tafahaona ankehitriny ny ray amandreny sy zanaka amin’izao taona vaovao izao , afaka mifampihaino tsara isika izao hoy izy , ka tsy maintsy misy ny fifampiresahana hanatsaràna an’Antananarivo izay soa iombonan’ny Malagasy .
Misokatra midanadàna hoy ben’ny tanana ny varavarany hifampiresaka amin’ny mpivarotra raha misy ny zavatra mampiahiahy . Raha mametraka fangatahana fihaonana ianareo hoy izy androany dia iray andro ihany dia mivaly io fangatahanareo io . Aoka isika hoy izy mba hiova toe-tsaina , ka tsy ho voafitaky ny mpanely tsaho fa hoe hamidin’ny ben’ny tanàna ny tsena etsy sy eroa. Vokatr’izany mba hanatsaràna ny fomba fiasa dia nanambara ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana fa tokony hanangana kaomisiona ny tsena lehibe tsirairay , ka izay mahasolo tena azy ireo no ho tendrena amin’izany , heverina fa tokony isaky ny 3 volana no hisian’ny fihaonana , nefa raha misy ny hamehana dia afaka mihaona amin’ny fotoana rehetra amin’ireo kaomisiona ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana .
Fehiny , vonona hiara-hiasa amin’ny ben’ny tanàna ny delegen’ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra , ny mpitantanana ny tanànan’Antananarivo ihany koa nanome toky azy ireo fa ho vary sy rano amin’izy ireo , ny fanarahana ny lalànakosa na izany aza tsy maintsy atao . Helisoa
Any Paris Frantsa ary hiverina tsy ho ela
Tonga any Paris renivohitra Frantsay omaly ny Filoha Marc Ravalomanana, rehefa nijnona kely tany Nairobi renivohitra Kenyana ny fiaramanidina izay nitondra azy. Nambaranymialoha ny niaingany teny Faravohitra fa hitafa amin’ny filoha Kenyana Uhuru Kenyatta izy, satria ity farany no faharoa tamin’ilay fifaninanana taty Afrika momba ny fahaiza-mitarika na Leadership fa ny filoha Ravalomanana kosa no voalohany. Tsar any mifanaja hoy izy satria adin’ombalahin’ny mpianakavy iny fifaninanana momba ny Leadership taty Afrika iny ka ny maharesy tsy hombiana ny resy n any faharoa tsy akoraina. Any Paris Frantsa, hihaona amin’ireo ao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara Frantsa n any TIM Frantsa sy ireo Malagasy rehetra monina any ivelany tsy ankanavaka anio tolakandro ny filoha Marc Ravalomanana, hiara-hankalaza amin’izy ireo ny taona vaovao. Hanana ny anjara toerany ny TIM Frantsa sy ireo Malagasy monina any ivelany amin’ny fanohanana azy aminy fifidianana filohampirenena amin’ity taona 2018 ity, hanampy ny Filoha nasionalin’ny antoko TIM eo amin’ny hoenti-manana sy ny ara-pitaovana izy ireo.
Harahantsika eto ihany ireo fandaharam-potoanany hafa any ivelany, efa naverimberina hatramin’izay fa mikatsaka hatrany ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy ihany koa izy amin’ny fivoahana any ivelany toy izao, na mbola tsy eo amin’ny fitondrana aza ny tenany. Andro maromaro no hijanonany any ivelany izao, ary heverina fa tsy maintsy hitondra voandalana an’i Dada amin’ny fiverenany tsy ho ela eto an-tanindrazana. Mikasika ny raharaham-pitsarana izay hetsehin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao indray na dia efa azo lazaina ho nivalona aza iny raharaha 8 taona lasa iny, dia manamafy hatrany ny Filoha Marc Ravalomanana fa fitsarana tsy mahefa no nitsara izany, ka tsy misy ny mampanahy azy. Efa ho 3 taona mahery tokoa izy no niriaria teto an-tanindrazana tsy nosamborina koa nahoana no amin’izao fotoana no hisy izany? Vakiana fotsiny hoy ny tanora ankehitriny izay, mampihomehy na mampitokiky ny ataon’ny fitondrana amin’izao fotoana hoy ny hafa…
Tsy hampiadana ny Malagasy ny fitondrana HVM
Vaovao ny taona na efa hisasaka aza ny volana janoary amin’izao fotoana hanoratanay izao . Arak’izany nanantena ny rehetra araka ny kabary firariantsoa nataon’ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha fa ho taona VAOVAO hanjakan’ny fiadanana ho an’ny vahoaka Malagasy ny taona 2018 , nefa toa ny mifanohitra amin’izany no hita ankehitriny . Ny vahoaka Malagasy misedra ny fahantrana , tsy mitsaha-mitombo ny vidin’entana toy ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy . Tsy novakian’ny fitondràna HVM loha anefa izany , satria na ny fisondrotan-karama tokony nomena ny mpiasa aza tsy nisy tamin’ny kabarin’ny filoha . Hiadana sy ho finaritra amin’izany ve ny vahoaka Malagasy amin’ity taona 2018 ity? Anjaranao ny mandinika sy mieritreritra ny valin’izany .
Vao niandoha ny taona dia mpiasa miisa 9000 no tapaka karama , koa hiadana sy ho finaritra ve izy ireo amin’izany ? Raha ny resaka politika indray dia vao mainka mihamafy hatrany ny fanenjehana ny mpanao politika tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra . Rehefa mikabary anefa ny filohampirenena dia natao ho an’ny vahoaka Malagasy 22 tapitrisa izany fa tsy ho an’ny andian’olona mankasitraka ny fitondràna ankehitriny fotsiny . Vao niandoha ny taona dia ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) no iharan’ny ankasomparan’ny mpitondra HVM , efa nisy izany fa nihamafy hatrany ankehitriny . Hita izany tany Toliara raha nikasa hanao fifampiharabàna tratry ny taona tamin’ireo mpomba azy tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana . Nisy ny soratra manakana ity farany nataon’ny mpomba ny fitondràna HVM any antoerana tsy handingana an’i Toliara , ny toerana hanaovana fivoriana tsy navelan’ny EMMOREG nidirana . Taiza no mbola nisy zavatra manakana ny Malagasy iray tsy handia any amin’ny faritra eto Madagasikara raha tsy tamin’izao fitondràna HVM izao ? Voararan’ny lalampanoeranana Malagasy anefa ny fihetsika toy izany , nefa dia olombe amin’ity fitondràna ity no maniraka mpamaraky jiolahimboto hanao fihetsika tsy mendrika hampiadiana ny samy Malagasy , koa hampiadana sy haha finaritra ny Malagasy ve ny fihetsika toy izany ? Ny haino amanjerim-panjakàna TVM no nandefa io vaovao io izay nampisy resabe tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny fampahalalam-baovao maro samy hafa satria dia nalefa tao anatin’io onjampeom-pirenena io ny vaovao mampiady ny samy Malagasy io , koa hampiadana ny Malagasy amin’izao taona vaovao izao ny fihetsika toy izany ?
Eto moa dia ny filoha nasionalin’ny antoko Tikoa i Madagadikara no lasibatr’izao fitondràna HVM izao satria mpanao politika hatahorany indrindra eto amin’ny firenena, tsy sahy miseho mivantana ireto farany hoe matahotra ny filoha Marc Ravalomanana , fa dia vakiana fotsiny hoy ny fitenin’ny tanora izy ireo . Ankoatra izay , niaraka nisakafo maraina tamin’ny mpanao gazety ny filoha Marc Ravalomanana ny Alakamisy lasa teo , nisy ny fanontaniana nanitikitika ny mpanao gazety mikasika ny raharaha 7 febroary tamin’izany , namaly mazava ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy manankery ny tribonaly nits ara azy , ka heveriny ho toy ny tsy misy iny , ary tsy natrehany rahateo. Ny androtr’iny ihany dia namaly bontana ny minisitry ny fitsaràna fa manankery hono ary azo hampiharina ny fanamelohan’ny fitsaràna an’i Dada izay efa ho 10 taona taty aoriana , hatramin’izay anefa inona no natao teo ?
Maro ireo didy tsy asian’ny fitsaràna resaka ny fampiharana azy : raharaha mpiasan’ny Air Mad noroahiny miisa 5 nandresy teo amin’ny tribonaly miady amin’ny fanjakàna , nefa tsy nasiana resaka . Rehefa bangoina izany rehetra izany dia tsy hampiadana ny vahoaka Malagasy mihintsy ny fitondràna HVM amin’ity taona 2018 ity fa resa-be FOTSINY NO BETSAKA. Helisoa.
Karaman’ny mpiasampanjakàna tapaka
Misy no mbola tsy tafaverina hatramin’izao
Fotoantsarotra ho an’ny tokantrano Malagasy ny volana janoary , ao anatin’izany indrindra anefa dia maro ireo mpiasam-panjakàna tapaka karama no mitaraina satria tena ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka izy ireo ankehitriny . Ny fisondrotry ny vidim-piainana efa mila tsy ho zaka nefa dia izao no mahazo azy ireo Raha tena ray amandreny mitsinjo ny vahoaka Malagasy ny mpitondra HVM ankehitriny dia tokony hamerina faran’izay haingana io karama io , Ny filoha Hery Rajaonarimampianina efa nanome baiko ny hamerenana ny karama tapaka faran’izay haingana mialohan’ny faran’ny taona , nefa toa antso an’efitra ihany izany ankehitriny .fa tsy nisy mpihaino . Hany ka lasa mampametram-panotaniana ihany ny olom-pirenena tsirairay hoe : tsy to teny amin’ireo olona eo ambany fifehezany intsony ve ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina ? Mampangidy hoditra ny mpitondra HVM anefa ity fihetsika nataon’ny fitondràna manapaka karama ao anatin’ny fety ity , sa misy olona manipy hoditr’akondro ny filoha Hery Rajonarimampianina ny manodidina azy ao e?
Filan-kevitry ny tanàna
Lany ny tetibolan’ny CUA amin’ity taona 2018 ity
Lany tao amin’ny Fivoriana ara-potoanan’ny Filankevitra Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), izay nodinihana nandritra ny 10 andro ka nifarana oamy Zoma 12 janoary 2018, ny Teti-bola iasana ho an’ny taona 2018 eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ; nasiana fanamarihana ka mila jerena manokana ny fidiram-bolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny Toeram-pivoahan’ny daholobe na ny WC Public sy ny eny amin’ny tsena. Momba ny tetik’asa eo anivon’ny Tsipy kanetibe kosa dia nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fanapahankevitra satria mbola mila fandinihana lalina . Fantatra koa fa nekena nandritra ny fivoriana ny hanofan’ny orinasa SATOM ny tanin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra any Mahavelona Ankazobe, izay manana velarana 832 m2 ka 1 Tapitrisa Ariary isam-bolana no vola miditra amin’ny CUA amin’izany , ity orinasa ity ihany koa no hisahana ny fiarovana ny faritra manodidina 45 Ha . Manaraka izany dia nomen’ny Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo alalana ny fanangonan-ketra miditra amin’ny CUA amin’ny alalan’ny finday na ilay antsoina hoe : Mobile Banking saingy tsy maintsy hajaina kosa ny lalàna. Hahazoana tombotsoa ity fomba iray ity satria afaka hialana amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly. Nekena koa ny hampiasana ny toerana eny amin’ny fasam-bahiny Anjanahary ho an’ ireo olona miisa 18 nanao fangatahana ary nahazo baiko ny Mpanatanteraka ny hitakiana ny vola tokony mbola hiditra teo taloha sy ny vaovao. Momba ny antsoina hoe “Plan d’Urbanisme de Détail” kosa, izay mahakasika ny tany eny Andraharo dia tapaka fa mbola mandalo ao amin’ny Kaomisiona atao hoe : Commission d’ Urbanisme ny raharaha. Amin’ny ankapobeny dia misy lohahevitra 4 lehibe no fonosin’ny Tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra 2018 dia ny Tetibola amin’ny fandaminana sy fandrindrana ny asa ; ny Tetibola ho an’ny fotodrafitr’asa ; ny Tetibola momba ny Sosialy sy ny Kolontsaina ary ny Tetibola ho an’ny Fitsinjaram-pahefana mba tsy hivangongo amin’ny foibe .
Aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo mpitondra
Resabe indray tato ho ato ny filazana hisamborana na hanaovana Notam ny filoha Ravalomanana, taorian’ny fanehoan-kevitra nifanaovany tamin’ny mpanao gazety farany teo iny. Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’i Lioka 6: 37 no hitondran’i Pr Harimalala Joseph ny fanehoan-keviny amin’ity anio ity, izay milaza manao hoe: “Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina hianareo”. Araka io voalazan’ny tenin’Andriamanitra io dia ampanetren-tena hoy ity mpandinika ity fa mibaribary ny tsy fahamarinana sy fitongilanana ao amin’ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana. Mampametra-panontaniana mantsy hoy hatrany ity mpandinika ity satria fotoana lava no efa nahatongavan’ny filoha Ravalomanana Marc teto an-tanindrazana kanefa dia navelanareo hiriaria nilamina teto izy ka izao indray vao hoe hosamborina sy ho gadraina mandra-maty?
Ny manaitra mantsy dia ao anatin’ny vanim-potoana hiatrehana ny fifidianana ve vao lazaina fa tokony higadra indray izy? Io no ilazana fa mitongilana sy miangatra ny HVM sy ny mpitsara fa tsy mitsara araka ny marina tokoa, noho ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra sy ny fahatahorana mafy ny filoha Ravalomanana Marc hilatsaka ho fidiana satria efa azo antoka fa tsy hahazo vato velively hianareo raha ny zavamisy nataonareo teto Madagasikara no refesina, ary efa fantatrareo fa tsy mamin’ny fon’ny vahoaka ianareo? Koa eo anatrehan’io tenin’Andriamanitra teo ambony io dia miantso anareo mpitondra fanjakana ankehitriny sy ny eo anivon’ny fitsarana aho, hoy ity mpandinika ity mba hampitsahatra ny fanenjehana lava ny filoha Ravalomanana fa hidiran-doza sy hanenina tongotra aman-tanana ianareo mpitondra satria aza adino fa olon’Andriamanitra iny ary manana iraka manokana hampandroso an’i Madagasikara satria mbola miaraka amin’ilay mpitsara ambony mihoatra izay heverinareo ao ambony ao, izay tompon’ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatreto an-tany.
Aoka araka izany mba tsy ho diso fahavalo hianareo HVM, indrindra ny raharaha 7 Febroary no hitsaranareo azy, izay mbola mahasaringotra ny maro aminareo mpitondra ireo anie izany nandritra ny fitondrana tetezamita nisy anareo e! Manamarina izany ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Matio 24: 9-11 manao hoe: “Ary dia hatolony ho amin’ny fahoriana hianareo ka ho vonoiny; ary ho halan’ny firenena rehetra hianareo noho ny anarako. Ary amin’izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro”. Araka io tenin’Andriamanitra io dia tsy ny filoha Ravalomanana no namono sy nandatsa-drà ny olona ny 7 febroary fa baikon’ireo mpaminany sandoka mba hahafahany milaza sy manamarin-tena hoe: io ary ilay nolazaiko fa tena hisy rà mandriaka rehefa miala eo amin’ny fitondrana ny filoha Ravalomanana ary porofon’izany dia tsy avy tao an-dapa ny tifitra fa avy tany an-damosin’ny olona nentina niani-dapa ka dia tanteraka io tenin’i Jesosy teo ambony io kanefa dia ny filoha Ravalomanana no nanilihana ny rihitra. Ny hazo avo tokoa halan-drivotra tokoa ka hamaranako azy dia tenin’i Jesosy ao amin’ny Jaona 17: 14 manao hoe: “Efa nomeko azy ny teninao; ary halan’izao tontolo izao izy satria tsy naman’izao tontolo izao, tahaka ahy tsy naman’izao tontolo izao”. Lezama
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Lalao Ravalomanana, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa Vaovao, Valosoa 13 Janvier 2018. Ajoutez ce permalien à vos favoris.